Freya Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / Freya Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Freya Dress Tutorial ဤနေရာတွင်သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အောက်က tab ကိုနှိပ်ပါ.
Copyshop အရွယ်အစား: 174စင်တီမီတာက x 64cm
တွယ်အပ်, stitch and finish. Repeat for the other side.
တွယ်အပ်, stitch and finish.
ထဲကအထည်ချုပ်မှားခြမ်းနှင့်အတူ, match the side seam allowance.